Salesforce.com isiri kushanda neInternet Explorer 7 (Chaizvoizvo inoita!) | Martech Zone
Salesforce.com isiri kushanda neInternet Explorer 7 (Chaizvoizvo inoita!)
China, Gumiguru 19, 2006 China, Gumiguru 19, 2006 Douglas Karr
Ini ndapinda muSalesforce.com mangwanani ano paIE7 uye handigoni kuona chero mabhatani ekuti anyatsoita chero mirairo. Vanoburitswa Vanodaidzwa vakabuda kwenguva yakati wandei paInternet Explorer 7… hapana chikonzero chekuti On On Demand / Software seSevhisi mupi yakanga isina kugadzirira izvi.
Chakatonyanya kuipa ndechekuti mbeveve meseji mukutsigira kwavo. Ivo vanokurudzira kuti HAUDI kukurumidza kukwidziridzira kuIE7 pachinozoita Yega Yekuvandudza. Ummmm, kana chiri CHIMWE CHINOGONESESA… unoita sei KUTI uwedzere kusimudzira? Oy.
KUKONZESA: Ukabvisa cache yako, inoshanda.
Kusiyana uye Kushambadzira
Maitiro Ekubvisa Internet Explorer 7
Gumiguru 19, 2006 na12: 22 PM
Chimwezve chikonzero chero munhu anoshandisa salesforce anofanira kunge achishandisa firefox, asi ini ndinonzwisisa kuti kumakambani mazhinji makuru izvi hazvizove sarudzo.
Gumiguru 19, 2006 na2: 57 PM
Salesforce.com yakagadzirisa bhatani nyaya zvakare munaKurume.
Kana iwe wakambochinja yako IE6 cache marongero kubva kune yakasara (Otomatiki) uye iwe uchangobva kukwidziridzwa kuita IE7, iyo IE6 CSS inogona kuchengetwa.
Edza kupinda mukati nekurova Ctrl-F5 kuti uwane zororo rakazara. Kana bvisa cache uye pinda zvakare. Kana kumirira maawa makumi maviri nemana. Ini ndiri pane yazvino IE24 kuburitswa mukwikwidzi uye ona mabhatani akanaka.
Zvakare, unogona kudzima auto kugadzirisa. Microsoft yakafukidza izvi mu IE blog (http://blogs.msdn.com/ie/default.aspxuye apa (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4516A6F7-5D44-482B-9DBD-869B4A90159C&displaylang=en)
Gumiguru 19, 2006 na7: 28 PM
Ndatenda, KT! Iwe wakachengetedza zuva!